Ny Tranobe Best in Black dia tetikasa iray mikendry ny hamorona karazana trano fonenana vaovao. Ny famolavolana anatiny amin'ireo tranobe dia maneho ny marindrano indostrian'ny mozika Meksika, ireo fitaovana voafidy dia hanangana fahatsapana ho mahagaga any amin'ny faritra sy fijery mafana ho an'ny trano, izany dia mifanohitra amin'ny endrika ivelany madio sy malefaka. Ireo endrika efatra dia hita taratra mazava amin'ny fametrahana tampoka ny endrika kilalao Tetris mamorona rindrina sy varavarankelin'ny tranobe, mamorona atmosfera maivana izay manome fampiononana ho an'ny mpampiasa.
Ny Trano Fivarotana
Ny Trano Fivarotana Ity tetikasa ity dia manenjika ny halaliny sy ny fahitsiana ny fitaovana, ny teknolojia ary ny habaka, ary manindry ny maha-marina ny fiasa, ny firafitra ary ny endrika. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fiantraikan'ny jiro sy ny fitaovana vaovao ho an'ny singa manasintona tsara indrindra, hahatratrarana ny tanjon'ny fanamboarana tampoka, hanomezana fahatsapana ny teknolojia tsy manam-petra ny olona.
Ny Trano Fonenana Mankasitraka ny maritrano taloha ny Merida, Mexico ary ny manodidina azy i Casa Lupita. Ity tetikasa ity dia nahitana ny famerenana indray ny casona, izay heverina ho lova, ary koa ny maritrano, trano anatiny, fanaka ary ny famolavolana tontolo. Ny foto-kevitry ny foto-kevitra ho an'ny tetikasa dia ny fahatongavan'ireo kolontsaina kolonely sy ankehitriny.
Cifi Donut Kindergarten CIFI Donut Kindergarten dia mifamatotra amin'ny vondron'olona monina. Mba hamoronana toerana fanaovana hetsika an-tsekoly dia mampifangaro ny fahaiza-manao sy ny hatsarana dia manandrana mampifangaro ny toerana fivarotana amin'ny sehatry ny fampianarana. Amin'ny alàlan'ny firafitry ny peratra mampifandray ny haben'ny telo-dimensional, ny tranobe sy ny tany dia mirindra tsara, miforona toerana fanaovana hetsika mahafinaritra sy mahasoa ny fampianarana.
Ny Trano Fisakafoanana Ny faritry ny tetik'asa manontolo dia lehibe, ny vidin'ny jiro sy ny fanodinana rano ary ny fametrahana ny rivotra amin'ny foibe, ary ny fitaovam-pitaterana an-dakozia hafa, koa ny fetra azo atao amin'ny haingon-trano anatiny dia somary voafetra ihany ny tetibola azo atao amin'ny haingon-trano anatiny. hatsaran-tarehy amin'ny fananganana ny tenany & quot ;, izay manome fahagagana lehibe. Namboariny ny tafo tamin'ny fametrahana jiro samy hafa habe amin'ny lanitra. Mandritra ny andro, ny masoandro dia mamirapiratra amin'ny jiro eny amin'ny lanitra, mamorona fika ny natiora sy mirindra.
Ny Trano Fisakafoanana Sy Ny Trano Japoney
Ny Trano Fisakafoanana Sy Ny Trano Japoney Dongshang dia trano fisakafoanana sy bara japoney iray any Beijing, izay amboaram-borona amin'ny endrika sy habe samihafa. Ny fahitana ny tetikasa dia ny famoronana tontolo fisakafoanana tokana amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo aesthetika japoney miaraka amin'ny singa amin'ny kolontsaina sinoa. Ny akora nentim-paharazana misy fifandraisana matanjaka amin'ny zavakanto sy ny asa tanana ao amin'ny firenena roa dia manarona ny rindrina sy ny kofehy mba hiteraka fifandraisana manokana. Ny akora voajanahary sy maharitra dia maneho ny filozofia manohitra ny tanàn-dehibe ao amin'ny tantara mahazatra Shinoa, ny Sete Fito amin'ny Ala Gorondro, ary ny ao anatiny dia manafoana ny fahatsapana fisakafoanana ao anaty alan'i alaza.
HandiShred Fikorontanan'ny Asabotsy 18 Septambra
Gamsei Ny Zoma 17 Septambra
Aix Arome Cafe Ny Kafe Alakamisy 16 Septambra
Ny Tranobe Ny Trano Fivarotana Ny Trano Fonenana Cifi Donut Kindergarten Ny Trano Fisakafoanana Ny Trano Fisakafoanana Sy Ny Trano Japoney